Rooble Oo Warbixin Ka Dhagaystay Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal - Bulsho News
Hirshabeelle: Yaa Ku Tartamaya Kursiga Ugu Adag Doorashada Aqalka Sare?
Raysal Wasaaraha xil-gaarsiinta ee dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan ka tirsan Guddiga Maamulka Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT).
Raysal Wasaare Rooble ayaa Guddiga doorashooyinka ee uu la kulmay Warbixin ka siiyay Halka ay marayaan howlaha Doorashada, iyadoo uu Ra’iisul Wasaaruhu ka jawaabay codsiyo uga yimid dhinaca Guddiga.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa waxaa lagu sheegay in Rooble uu Guddiga doorashooyinka uga Jawaabay dalab la xiriira sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka dalka.
Kulankaan uu Raysal Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta la yeeshay xubno ka tirsan ka tirsan Guddiga Maamulka Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) ayaa kusoo aaday, iyada oo weli taagan yahay khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo RW Rooble.
Muddada Uu Gareth Bale Ka Maqnaan Doono Garoomada...
Wararkii ugu dambeeyey ee isku dayka afgambi ee...
Qaramada Midoobay: “Waxaa jira Ciidamo Soomaali ah oo...
Afghanistan: Maxay tahay raaligelinta uu shacabkiisa u jeediyay...